नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व लोकमान बचाउन पट्टी, युवा नेताहरु के गर्लान् – ZoomNP
नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व लोकमान बचाउन पट्टी, युवा नेताहरु के गर्लान् प्रकाशित मिति: आइतवार, कार्तिक ०७, २०७३ समय - १०:५२:३७ कात्तीक ७ संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रकरणमा छलफल गर्न तथा रणनीति बनाउन कांग्रेसका युवा नेताहरु विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र धनराज गुरुङले आजबाट बुद्धिजिवी भेला गरेर परामर्श थालेका छन् । स्रोत अनुसार उनीहरुले कांग्रेस समर्थक बुद्धिजिवीहरुको भेला गरेर पार्टी नेतृत्वलाई दवाब दिने रणनीति बनाएका हुन् ।
पार्टी नेतृत्व महाभियोगको विपक्षमा लाग्ने सम्भावना देखिएपछि कांग्रेस समर्थक बुद्धिजिवीहरु पनि सक्रिय भएका छन् । डा. केदारभक्त माथेमा, जुगल भुर्तेल, जिवराज पोखरेल लगायतका बुद्धिजिवीहरुको आज भेला छ । सो भेलामा कांग्रेसका यी युवा नेताहरु पनि सामेल हुने छन् ।
स्रोत अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदीप पौडेल र जीवन परियारले पनि यो समूहमा मिसिएर महाभियोगको पक्षमा लविङ गर्न थालेका छन् । कांग्रेस समर्थक बुद्धिजिवीहरुले आजै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शसांक कोइराला, कृष्ण सिटौला लगायतसँग भेट्ने श्रोतको भनाई छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बस्दैछ र भोलिको वैठकमा धनराज गुरुङले बोल्ने भएका छन् । स्रोत अनुसार महाभियोगको पक्षमा लागेका युवा नेताहरुलाई फकाउन मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी लागेका छन् । केसीले यी युवा नेताहरुलाई लोकमानको पक्षमा लाग्न दवाब दिन थालेका छन् ।
महाभियोगको पक्षमा लागेका गगन थापा मन्त्री केसीका सहोदर छोरी ज्वाईं हुन् ।